Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVita
Uya kufumana ukuzola kokwenyani kunye nokuphumla eSerenity Inn Ruby Bay, i-boutique yodidi oluzimeleyo enechibi elinetyuwa eshushu (ukusetyenziswa ngexesha lonyaka kuphela) kunye neembono ezimangalisayo zepanoramic ngaphesheya kweTasman Bay ukuya kwiSiqithi sase-D'Urville kunye neNelson elundini, zonke ziqhubeka. ihektare yomhlaba oqengqelekayo oneziqhamo ezininzi kunye nemithi yomnquma kunye neentlobo ngeentlobo zezityalo. Ilungile kuhambo lwemini ukuya eAbel Tasman Park okanye eNelson City. Kubucala kwaye kunoxolo, kodwa yimizuzu emi-5 kuphela ukuya kwiivenkile kunye neekhefi kwilali yaseMapua.
I-Cottage inoyilo lwendawo evulekileyo enegumbi lokuhlala elikhulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela, igumbi lokulala labucala elinebhedi entsha yodidi oluphezulu lokumkanikazi, igumbi lokuhlambela elineshawa, irack yetawuli eshushu kunye nepatio yokonwabela. Ifakwe kakuhle ingaphakathi elipholileyo elinesitayile sanamhlanje ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi ngalinye linombono webhayi, kwanegumbi lokuhlambela le-en suite.
Igumbi lokuhlala line-40” HD TV. Kukho iWiFi yasimahla kwindawo.
Le yindawo yokuzenzela ukutya. Ikhitshi linezinto zonke zesidlo sakusasa esonwabisayo: isonka esitsha, amaqanda asimahla, ubisi olusuka ngqo kwindawo yobisi yasekhaya, iziqhamo ezitsha, ibhekoni esuka kwibhula, i-cereal, ibhotolo kunye neejam. Ukuba uneemfuno ezikhethekileyo zokutya, nceda usazise ngaphambi kokufika kwakho.
Ibhedi elingana nokumkanikazi ineebhedi ze-cotton eziyi-100% kwaye kwigumbi lokuhlambela le-en suite yi-eco-friendly Villa Earth ingqokelela yeemveliso zokhathalelo lwesikhumba. Ukukwenzela lula kukho iingubo ezimbini zelaphu le-terry kunye neetawuli zamachibi.
Inkonzo yokuhlamba impahla ingalungiselelwa i-$ 15.00 umrhumo ngomthwalo ngamnye. I-cottage kunye nepropathi ejikelezileyo ayikho indawo yokutshayela. Indawo yokupaka yasimahla.
Le yindawo "yasemaphandleni yokuphila", apho ubumfihlo buqinisekiswa ngamaqashiso amakhulu. Awuzukwazi ukuba abamelwane balapha.
Ulwandle luhambo lwemizuzu emihlanu ukuhla endulini.
Indlu ikufuphi nendlu yethu. Siyayihlonipha imfihlo yakho, kodwa uVita uyafumaneka ukuba uyamfuna. Ufumaneka ngefowuni okanye ngetekisi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ruby Bay